Munaasibad Loogu Wanqalay Golaha Dood- Wadaag, Laguna Soo bandhigay Cilmi baadhis ay Sameeyeen Ardayda Somaliland ee Uganda | ASKAR'S BLOG
Abdikadir Askar / October 2, 2012
Kampala-(HWN)-Munaasibad balaadhan oo si heer sare ah loo agaasimay, looguna wanqalayey Gole cusub oo la yidhaa. DOOD-WADAAG Forum, ayaa lagu qabtay hoolka weyn ee qaybta tacliinta sare (School of Postgraduate) ee jaamacadda Kampala International University. Waxaa ka soo qayb galay arday aad u tiro badan oo ka kala socotay dhamaan jaamacadaha kala duwan ee dalkani Uganda. Waxaa marti sharafka koowaad ee munaasibada ahayd Marwo Kaltuun oo ah Gudoomiyaha Dallada Guud ee Haweenka Somaliland, NAGAAD. Kulankani oo ah kii ugu horeeyey ee noociisa ah ee laga qabtay guud ahaan jaamacadaha ardayda Somaliland wax ku barato ee dalkani Uganda.
Xafladani oo sida ka muuqatay ku suntanayd madal aqooneed, laguna soo bandhigay waraaqo cilmi baadhiseed oo ay sameeyeen ardayda postgraduateka ee jaamacadaha dalkani Uganda. Waxaa lagaga dooday ” Doorka Dhaqan-dhaqaale, Siyaasadeed iyo Bulsho ee Dhalinyarta Soomaaliland“.
Waxa ugu horayn halkaasi ka hadlay Mudane Cabdiqaadir Dayib Askar, oo ku hadlayey afka DOOD-WADAAG Forum, ahaana agaasimayaashi sida meeqamka sare ah u soo diyaariyey hawshani. Mudane Askar oo ah arday halkani ka diyaariya Masters of Arts in International Relations and Diplomacy jaamacada Cavendish University, wuxuu ku nuux nuuxsaday ula-jeedada Golahani loo aasaasay. Waxaana hadalkiisii ka mid ahaa ” Madashani waa madal dood-wadaag ah oo loogu talo gelay in ay ka soo baxaan natiijooyin wax-ku- ool ah oo xafidan. Haddii Eebe xukumo waa madal lagu falanqayn doono arrimo badan oo saameeya nolosheena, sida siyaasadda iyo dhaqaalaha, dhaqanka iyo diinta, waxbarashada iyo teknolajiyada, IWM…”
Wuxuu intaasi ku daray Mudane Askar in ay ujeeddada Golahani loo aasaasay ay tahay: In dhalinyaradu hesho madal ay xalka ku sameyso, aqoonta laysku dhaafsado, garaadkana lagu dhiso. Sidoo kalena dhalinyartu ku leyli baxaan iyagoo baranaya dhaliilida hufan, fakarka adag (critical thinking), iyo aragti-is-dhaafsiga heerka sare iyo weliba in dhalinyartu ku kobciso aqoontooda bandhig qoraaleed, mashrax-ka-hadlineed, iyo dhagaysi barasheedban si loo gaadho bulsho aqooneed ( knowledge-sharing community),hal abuurnimadooda (creativity) kor ugu qaadan si xikmadaysan. Wuxuuna ku soo gabagabeeyey in golahani u furan yahay dhamaan dhalinyarta, laguna soo bandhigo doono qoraalo cilmeyaysan (acadamic research), si dalka iyo dadkuba uga wada faa?iidaystaan.
Waxa iyana halkaasi ka hadashay Marwo Kaltuun Sheekh Xassan, Gudoomiyaha Dallada Haweenka Somaliland, iyadoo ku dheertay muhiimada Golayaasha noocan ahi u leeyihiin bulshadeena, si loogu lafo guro baahiyaha aasaasiga ah ee nolosheena ku gadaaman haday tahay dhaqan, dhaqaale iyo wixii la halmaaha. Waxay Marwadu si xoog ah ugu mahad celisay ardayda Somaliland ee Uganda wax ka bartay, iyadoo ku tilmantay inay door fiican oo hormoodnimo kaga jiraan jiilalka cusub ee dalka Somaliland u maqan. Waxay carabka ku adkaysay sidii loo sii wadi lahaa doodaha noocani oo kale ah, isla markaana diiradda loo saari lahaa arimaha xasaasiga ah ee bulshadeena haysta iyo ka hadalkoodaba.
Ka dib furitaankii Golahani, waxaa si toos ah loogu soo bandhigay cilmi baadhisyadii ardaydu sameeyeen. Waxaana kooramka si farshaxnimo leh u daadihinayey Shaafici Colaad, kana mid ahaa ardayda doorka koowaad ku lahaa qabsoomida munaasibadani, isagoo geliyey maskax iyo muruq badanaba. Waxaa doodani ka qayb qaatay afar arday oo ah ardayda masterska ka wada dalkani.
1. Cabdiraxman Cisman, oo ka wada MBA( Finance) Jaamacada Kampala International University, ahna dhalinyarta aadka u firficoon. Wuxuu ahaa Gudoomiyihii hore ee Garabka dhaliyarta Xisbiga UCID iyo Xoghayahiisii Maaliyadaba. Wuxuu sidoo kale ahaa Agaasimihii ASAL JET. Cabdiraxman wuxuu ku soo bandhigay waraaqda ah: Doorka Dhalinyarta ee Bulshadeena iyo Hab-fakarkooda, isagoo si tax dar ah u eegaya heerarka kala duwan ee fakarkooda loo saamayn karo.
2. Xassan Cabdi Shire, oo isna ka wada MA (International Relations), Jaamacada Kampala International University, oo isna ah dhalinyarta sida weyn uga qayb qaatay xeerkii lagu ansixiyey in dhalinyartu ka qayb qaadato Doorashadda Golayaasha Deegaanka. Wuxuu ahaa la taliyaha iyo xidhiidhiyaha Dallada Guud ee xidhiidhisa dhaliyarta Somaliland, SONYO. Wuxuu aasaasay isla markaana noqday agaasimihii ugu horeeyey ee ururka SOPDA. Wuxuu ka mid noqday shaqaalaha waaxda qorshaynta ee Wasaarada Qoryshanta Qaranka Somaliland. Sidoo kale wuxuu ahaa dhalinyartii Golaha dhexe ee Xisbiga UCID, noqdayna gudoomiye -xigeenkii garabka dhalinyarta ee isla xisbigaasi. Xassan wuxuu ku soo bandhigay waraaq cilmeyeed ku saabsan: Doorka Dhalinyarta ee ka qayb qaadashada Siyaasadda.
3. Amal Sh. Abdiraxman Shamax, oo iyana ka wada MA( Public Administration and Management) Jaamacadda Kampala International University. Waa gabadh qoraa sare ah, noqtay macalimad muddo dheer, unna ololaysa kor u qaadida iyo kobcinta doorka haweenka ( Women Empowerment Activist). Amaal Shamax waxay ku soo bandhigtay iyana warqad cilmiyeed ku saabasan: Doorka Dhalinyarta ee Kobcinta Dhaqaalaha iyo Shaqo-Abuurkaba.
4. Xassan Maxamed Miisaan, oo ka diyaariya MA (Development Studies) Jaamacada Kampala International University, degreegiisii koowaadna ku qaatay BDS Jaamacada Kampala University. Xassan wuxuu u ololeeyaa dhaliyarada ( Youth Activist), wuxuu noqday Xoghaye Guud ee dallada Ardayda Somaliland (USOLSA), wuxuu ka qayb qaatay baadhitaano badan oo laga sameeyey dalka gudihiisa, isagoo la shaqeeyey Jaamacada Cammuud, TPO iyo haydaha Qaramada Midoobay. Xassan isna wuxuu ku soo bandhigay warqad cilmiyeed ku saabsan : Doorka Dhalinyarta ee Dhaqan iyo Fan.
Gebo-gebadii waxaa soo gunaanaday, Mudane Shaafici Maxamed Colaad, oo balanqaaday inay doodani noqon doontomid joogto ah, oo si cilmiyeysana loogu doodi doono madashani, iyadoo kolba lagu faaqidi doono arrimaha cusub ee muhiimada xoogan leh. Kulanadani waxa loogu talo galay inay qabsoomaan labadii todobaadba hal mar si ay ardayda Jaamacaduhu ugu helaan fursado ay ku soo bandhigaan qoraaladooda cilmiyeeed , iskuna dhaafsadaan aragtiyhooda togan ee qof ahaaneed.
FIIRO GAAR AH : Goluhu wuxuu soo saari doonaa nuqul qoraaleed ku saabsan doodani : Doorka Dhalinyarta Somaliland ee Dhaqaale, Siyaasadeed iyo Bulsho. Waxaana lagu soo bandhigi doonaa mareegtani isaga oo af-Soomaali iyo af-ingiriisi labadaba ku qoran .
Xafiiska Wararka Bariga Iyo Badhtamaha Afrika
October 2, 2012 in Somali.
← My Eid Celebration, Happy Moments!
My Graduation Day @ Kampala International University →